I Cryogenic Vials Nalgene
Ikhaya > Imikhiqizo > I Cryogenic Vials Nalgene
(Yonke imikhiqizo engu-24 ye-I Cryogenic Vials Nalgene)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-I Cryogenic Vials Nalgene ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza I Cryogenic Vials Nalgene. Nikeza ikhwalithi ephezulu I Cryogenic Vials Nalgene ngentengo ephansi eshibhile.
I Cryogenic Vials Nalgene ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-I Cryogenic Vials Nalgene eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-I Cryogenic Vials Nalgene ngokuqondile kusuka ku-I Cryogenic Vials Nalgene abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.